Dhiig Yari (aneemiyo) - Wikipedia
Dhiig Yari (aneemiyo)
Dhiig Yari (, ) waa erey kasoo jeeda giriig oo u dhigma dhiig li'i, waa xaalad dhacda markii dhiigu ku yaraado jirka, dhiiga oo yaraada ayaa keenta in jirku si fiican u gudan waayo hawshiisii, waxaa yaraanay uksijiinka gaaray jirka taasoo ay ka dhalato daal iyo madax xanuun, iyo awood yari indhaha ah iyo dansanaan jirka ah, waxaa keena dhiig yarida sadex arimood oo kala ah
dhiig yari ka timid dhiig la shubay ama dhaawac u dhamaaday.
khalkhal gala qalabka dhiig soo saarka jirka.
iyo in googo' uu ku dhoco unugyada dhiiga iyadoo aysan gaarin waqtigii ay dhiman lahaayeen
Dhiig yari waa tirada unugyada dhiigga cas-cas oo ka yar sidii caadiga ahayd.
Unugyada dhiiga cas oo xanuunsan
2 Waxyaabaha keena aneemiyada
3 Tilmaamaha lagu garto
6 Lifaaq banaanka ah
Unugyada dhiigga cas-cas waxay ogisjiinta u xanbaaraan qaybaha jidhka oo dhan. Marka ay tirada unugyada dhiigga cas-cas yar yihiin, ogsijiin yar ayaa soo gasha qaybaha jidhka. Tani waxay qofka ka yeeli kartaa mid dareema in uu daallan yahay oo daciif yahay.
Waxyaabaha keena aneemiyadaEdit
• Dhibaatooyin ka yimaada sida feerada ama birta iyo cuntooyinka kale uu jidhku u isticmaalo • In aan la cunin cunto ay feeradu ku badan tahay • Dhiig ka yimaada afka, hunguriga, caloosha ama xiidmaha • Dhiig ka yimaada hoosta haweeneyda ama dhiig bax badan oo caadada ka yimaada • Dhallaanka ka yar hal sano ee cabba caanaha lo’da ama caanaha ariga • Dhallaanka lagu quudiyo caano boore aan lahayn feero ama bir dheeraad ah.
Tilmaamaha lagu gartoEdit
Haddii aad qabto wax calaamadahaan ka mid ah, takhtarkaaga la xiriir. • Daciif ama daal dareensan tahay • Maqaarkaaga, faruuryaha, cirridka, indhaha dhinacyadooda, ciddiyaha ama calaacalaha gacmuhu midab beelaan. • Indhaha oo ku madoobaado ama mugdo noqdo markaa istaagto • War-wareer ama miyir beelid • Neefsashada oo kugu gaabata ama feedho xanuun • Wadnaha oo si deg deg ah u garaacma • Dhallaanka iyo carruurta oo si gaabisa u kora
• Takhtarkaagu wuxuu baari doonaa si uu u ogaado sababaha dhiig yarida kuu keenay iyo in uu qorsheeyo daaweyntaada. Daaweyntaada waxaa ku jiri kara: • Cunidda cuntooyin caafimaad leh oo ay ka mid yihiin furuto, khudrad, rooti, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, hilib iyo kalluun. In aad cunto cuntooyin feeradu ku badan tahay sida khudradda caleenta ah, hilibka guduudan, looska iyo digirta. Takhtarkaagu waxaa laga yaabaa in uu doonayo in uu la kulmo cunto qore si laguugu qorsheeyo cuntooyin caafimaad leh. • In aad qaadato feero kordhiye. • Cabidda 6-8 koob oo cabitaanno ah maalin walba. • In lagu siiyo dhiig ku shubid si loo beddelo feerada iyo dhiigga kaa lumay haddii dhiig-yari siyaado ah ku hayso. Isla markiiba aad takhtarkaaga haddii aad: • War-wareereysid markaad istaagto • Ay neefsashadu kugu gaaban tahay ama cadaadis feeraha aaddareemayso.
Lifaaq banaanka ahEdit
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhiig_Yari_(aneemiyo)&oldid=207466"
Last edited on 8 Diseembar 2020, at 14:30
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Diseembar 2020, marka ee eheed 14:30.